Ezimbonini ezahlukahlukene, inqubo yokukhiqiza ye-emulsion iyahluka kakhulu. Lokhu kwehluka kufaka izinto ezisetshenzisiwe (ingxube, kufaka phakathi izinto ezahlukahlukene kusixazululo), indlela ye-emulsification, nezimo ezengeziwe zokucubungula. Ama-emulsions ukuhlakazwa kweziphuzo ezimbili noma ngaphezulu ezingabonakali. Ukuqina okuphezulu kwe-ultrasound kunika amandla adingekayo ukusabalalisa isigaba soketshezi (isigaba esihlakazekile) sibe yiconsi elincane lesinye isigaba sesibili (isigaba esiqhubekayo).
Imishini ye-Ultrasonic emulsificationkuyinqubo lapho oketshezi ezimbili (noma ngaphezulu kwezimbili) ezingaphatheki zixutshwe ngokulinganayo ukwakha uhlelo lokusabalalisa ngaphansi kwesenzo samandla e-ultrasonic. Uketshezi olulodwa lusatshalaliswa ngokulinganayo kolunye uketshezi ukwenza i-emulsion. Uma kuqhathaniswa nobuchwepheshe nemishini ejwayelekile ye-emulsification (njenge-propeller, i-colloid mill ne-homogenizer, njll.), I-emulsification ye-ultrasonic inezici zekhwalithi ephezulu ye-emulsification, imikhiqizo ezinzile ye-emulsification namandla aphansi adingekayo.
Kunezicelo eziningi zezimboni ze i-ultrasonic emulsification, Futhi i-ultrasonic emulsification ingenye yezobuchwepheshe ezisetshenziselwa ukucubungula ukudla. Isibonelo, iziphuzo ezibandayo, i-ketchup, imayonnaise, ujamu, ubisi lokufakelwa, ukudla kwezingane, ushokoledi, uwoyela wesaladi, uwoyela, amanzi kashukela nezinye izinhlobo zokudla okuxubekile okusetshenziswa embonini yokudla sekuhloliwe futhi kwamukelwa ekhaya nakwamanye amazwe, futhi kuphumelele umphumela wokwenza ngcono ikhwalithi yomkhiqizo nokusebenza kahle kokukhiqiza, kanye ne-carotene emulsification encibilika emanzini ihlolwe ngempumelelo futhi yasetshenziswa ekukhiqizeni.
I-banana peel powder yenziwa ngaphambi kokuhlakazeka kwe-ultrasonic kuhlangene nokupheka okuphezulu, bese i-hydrolyzed yi-amylase. Isilingo se-single factor sisetshenziselwe ukutadisha umphumela walokhu okwenziwe ngaphambili ezingeni lokukhishwa kwefayibha yokudla encibilikayo ephuma ebhananeni likabhanana kanye nezakhiwo ze-physicochemical ye-fiber engenakunyibilika yokudla okuvela kucwecwe lukabhanana. Imiphumela ikhombise ukuthi amandla okuphatha amanzi namandla okubopha amanzi okusabalalisa kwe-ultrasonic kuhlanganiswe nokwelashwa okuphezulu kwengcindezi kwenyuswe ngo-5.05g / g no-4.66g / g, ngokulandelana ngama-60 g / g kanye no-0.4 ml / g ngokulandelana.
Ngiyethemba ukuthi okungenhla kungakusiza uwusebenzise kangcono umkhiqizo.